Iga bixi biilasha dhakhtarkayga: Dadka Maraykanka oo waydiisanaya ​​caawinaad bixinta daryeelka caafimaadka
By Mark Zdechlik | MPR News [Read the story in English here.]
Tammy Fox waxa ay doonaysay inay caawiso ka dib markii qof ay saaxiib yihiin uu ku dhacay xanuun naadir ah oo saameeya difaaca jidhka, kaas oo aan si sahal ah lagu aqoonsan una baahnaa safarro badan oo loo galayo Mayo Clinic.
Inkastoo ayan waxba ka qaban karin caafimaad ahaan, Fox waxay ogayd in ay jirto hab fudud oo lagu yareyn karo culeyska biilasha caafimaadka iyo kharashyada la xiriira booqashada dhakhtarka. Waxay u jeesatay bogga internetka ee GoFundMe.
"Waxaa lagaa rabaa cuntada, waxaa lagaa rabaa hudheelada, sida aan idhi, gaaska, waxaas oo dhan waxay ubaahan yihiin in la daboolo," ayay tidhi Fox, oo ku nool Minneapolis banaankeeda.
Kaalmo-dhaqaaleed ayaa ka yimid dad ajnabi ah, siday sheegtay. "Waa arrin waali ah oo aad u fiicaan sida ay dadku u wanaagsan yihiin iyo waxa ay diyaar u yihiin inay bixiyaan. Dadku, marka ay isu yimaadaan, waxay dhaqaajin karaan buuraha, waxaanay ila tahay waa wax la arkoo aad u wanaagsan."
GoFundMe, oo ah shabakadda ugu wayn ee internetka ee ah barnaamijka lacag-ururin, ayaa sheegay in dadku ururiyeen in ka badan $5 bilyan oo ka timid 50 milyan oo deeqood siddeedii sano tan iyo bilowgiisii.
Waxay noqotey habka loo maro dadka u baahan in laga caawiyo bixinta dhakhtarkooda. Maal-gelinta caafimaadka ayaa hadda ah xisaab ahaan 1 ka mid ah 3-dii olole ee shabakadda, waxayna keenaan lacag ka badan qaybaha kale ee GoFundMe, ayuu yidhi madaxa sare ee shirkadda GoFundMe Rob Solomon.
"Qaabkii hore, waxa aad siinaysay $20 qofkii u baahan gargaar," ayuu yidhi Solomon. "Qaabkan cusub, waxaad siin $20, dadka ayaad la wadaagi taasoo noqon karta 10, 20, 50 ama 100 qof oo sidaas sameeya. Sidaas darteed, $20-kii waxay kuu noqon kartaa boqolaal, haddii ayan noqon kumanaan, doolar."
Kalsoonida dadka Maraykanku ku qabaan in ay awoodi karaan daryeelka caafimaadka ayaa sii dhacaya sidoo kalena kor u kaca qeybta la bixiyo iyo jar-jaryada ayaa in badan oo leh caymis caafimaad ka dhigay kuwo aan awoodi karin inay isticmaalaan, ayay tidhi Sara Collins, oo ah dhaqaaleyahan Commonwealth Fund u daraaseysa dareenka daryeelka caafimaad ee Maraykanka.
Ururku wuxuu dhowaan daraasad ku sameeyay dadka Maraykanka ah ee jira da’ lagu shaqeeyn karo iyagoo weydiiyay in ay bixin karaan biil caafimaad oo lama filaan ah oo ah $1,000 oo lagu bixinayo 30 maalmood. Ku dhawaad kala badh ayaa yidhi maya.
"Waxaan aragnaa in dadka aan caymiska ku filan lahayn ay u dhow yihiin kuwa aan wax caymis ah lahayn inay soo sheegaan dhibaatooyin la xidhiidha bixinta biilashooda caafimaad ayna sidoo kale soo sheegaan inaanay helin daryeel caafimaad oo loo baahan yahay oo u dhigma heerka kuwa aan caymiska lahayn," ayay tidhi. "Sidaa daraadeed, ma aha wax la yaab leh in dadku ay lacag ururinayaan iyagoo u maraya adeegsashada dadwaynaha. Laakiin dhab ahaantii waa inay ahaataa mid walaac qoto dheer leh ku abuurta siyaasad dejiyeyaasha iyo bixiyeyaasha."
by Sara Porter, MPR News 7/6/2018 6:13:16 PM